डा. केसीले रत्‍नपार्कमा बस्‍न सुहाउँछः शर्मा — OnlineDabali
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा संस्थान् (आइओएम)का पूर्वडिन डा. शशी शर्माले अनसनरत डा.गोविन्द केसी अाफू गर्न नसक्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने ब्यक्ति भएको बताएका छन् । शर्माले डा.केसीलाई डिन बनेर देखाउन चुनौती समेत दिए ।
२०७० मा शर्मालाई आइओएमको डिन नियुक्त गरेपछि वरियता मिचेको भन्दै डा. केसी अनसनमा बस्नुभएको थियो । डा. केसीको अनसनका क्रममा सरकारले २०७० माघ ८ मा शर्मालाई डिनबाट बर्खास्त गर्दै डा.जगदीशचन्द्र अग्रवाल डीन नियुक्त गरेको थियो ।
डा.केसीको अनसनकै कारण पदमुक्त भएका शर्मालाई अदालतले पुनःवहाली गरेको थियो । उनको अवधि ४ दिनमात्रै बाँकी रहँदा पुस २३ गते सर्वोच्च अदालतले पुनःवहाली गर्न अादेश गरेको थियो । समयका हिसाबले शर्माको पुनः वहाली भएको समय पनि सकिएको छ तर डा.केसी अनसनमै छन् । उनले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई कारवाहीको माग समेत गरेका छन् ।
शर्माले डा.केसीलाई अनसन बसालेर अाफू डिन हुन नचाहेको बताउँदै अाफू पहिलेकै काममा फर्केको बताए । उनले स्वास्थ्य क्षेत्र संवेदनशील भएको बताउँदै काम गर्नेहरुलाई डिस्टर्ब नगर्न केसीलाई सुझाव दिएका छन् । शर्माले रत्नपार्कमा गएर अनसन बस्न पनि सुझाव दिएका छन् ।
जाली फुट्‍ने गरी श्रीमानले कुटेपछि ‘निर्मली’ले मागिन् सुझावः डिभोस गरौं की अभिनय छोडौं ?